RIKOODHADII laga diiwaan geliyey guushii soo laabashada ahayd oo ay Liverpool ka gaartay kooxda Stoke City ee Premier League – Gool FM
RIKOODHADII laga diiwaan geliyey guushii soo laabashada ahayd oo ay Liverpool ka gaartay kooxda Stoke City ee Premier League
(Liverpool) 27 Dis 2016 – Liverpool ayaa guul soo laabasho 4-1 ah garoonkeeda Anfield kaga gaartay naadiga Stoke City, waxaana ay dib ugu soo laabtay kaalinta labaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League.
Reds gool ayaa waqti hore looga naxsaday, laakiin saddex gool oo ay ka kala heshay Adam Lallana, Roberto Firmino, Daniel Sturridge iyo mid uu iska dhaliyey xiddiga Stoke ee Giannelli Imbula ayey Liverpool ku badisay kulankan.
>- Liverpool ayaa dhalisay 86 gool oo horyaalka ah sanadka 2016, waana markoodii ugu badnaa oo ay goolashaas ku dhaliyaan sanad gudihiis tan iyo sanadkii 1985-kii oo ay dhaliyeen 87 gool.
>- Daniel Sturridge goolkii uu ka dhaliyey Stoke ayuu ku dhaliyey kaliya 56 ilbiriqsi, kaddib markii uu ka soo kacay kursiga keydka qeybtii labaad ee ciyaarta.
>- Daniel Sturridge ayaa dhaliyey goolkiisii ugu horreeyey Premier League xilli ciyaareedkan.
>- Stoke ayaa iska dhalisay goolasha ugu badan Premier League xilli ciyaareed, waxaana ay iska dhaliyeen 3 gool, dhammaan saddexdaas (own goal) ayaa yimid iyadoo ku ciyaaraysa meel ka baxsan garoonkeeda.
>- Roberto Firmino ayaa 15 jeer shabaqa soo taabtay Premier League sanadkan 2016 waana in ka badan ciyaaryahan kasta oo kale ee ka tirsan kooxda Liverpool.
>- Adam Lallana ayaa ku lug yeeshay 13 gool, 7 gool waa uu dhaliyey 6 gool oo kalena waa uu caawiyey, waana in ka badan xiddigaha khadka dhexe ka dheela Premier League ee xilli ciyaareedkan.
>- Kooxda Liverpool ayaa goolkii ugu horreeyey Premier League looga dhaliyey garoonkeeda Anfield, markii ugu horreysay tan iyo bishii May, markaasoo ay uga dhalisay Chelsea.
>- Jonathan Walters ayaa goolal badan Premier League kaga dhaliyey Liverpool, waxaana uu ka dhaliyey 6 gool 12 kulan oo uu ka horyimid, mana jiro koox kale oo goolal intaas la eg uu kaga dhaliyey horyaalka.
>- Goolkii koowaad oo uu Jonathan Walters ka dhaliyey Liverpool ayaa ahaa goolkii 500-aad ee laga dhaliyo Premier League xilli ciyaareedkan.
>- Liverpool ayaa sii dheereysatay rikoodhkeeda guuldarro la’aanta garoonkeeda iyadoo sii odaysa haatan 16 kulan oo aan gurigeeda looga adkaan horyaalka Premier League.
>- James Milner ayaa loo diiwaan geliyey kulankan 10 gool caawin horyaalka Premier League sanadkan 2016, waana in ka badan Alexis Sánchez oo 9 caawin sameeyey, David Silva (8), Mesut Özil (6) iyo Eden Hazard (2).
>- 100 gool oo Premier League ayey 48 kulan ku dhalisay Liverpool oo uu tababare u yahay Jurgen Klopp.
"Chelsea waa ay u qalantaa ku guulaysiga Premier League laakiin waa haddii..." - Klopp